NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 11, 2015 Laisser un commentaire sur NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA.
« Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34
***Andriamanitra tena tia: Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
***Ny toetran’ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia hafa noho ny toetran’Andriamanitra! Inona no fanaon’ny fariseo? Miteny ihany izy, fa tsy manao. Mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin’ny soroky ny olona, nefa tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ny rantsan-tanany anankiray aza. Ny an’Andriamanitra dia tsy ny ratsantanany ihany no mihetsika fa izay maha izy azy, izay tena sarobidy indrindra teo Aminy no nafoiny, dia ny Zanani-lahy tokana. Ny marina hamonjy ny tsy marina. Tsy fony isika tsara no nanomezan’ Andriamanitra an’i Jesosy Kristy ho antsika fa fony isika mbola ratsy.
***Ny nitiavan’i Kristy antsika: Nanolotra ny ainy ho sorona noho ny fahotantsika Izy. Nalatsaka ny ràny mba hahazoantsika famelan-keloka raha mibebaka isika, mifona amin’Andriamanitra, ka ny ràny latsaka no antoka ihainoan’Andriamanitra ny fifonantsika. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy no nanosika Azy ho faty ho antsika, raha ny marina dia tsy nisy tombony ho an’ny tenany samy irery fa tena fahasoavana ho antsika izany nataony izany. Tahaka an’ilay samaritana niantra ilay olona novonoin’ny jiolahy, ka niantoka ny fitsaboana ilay naratra na ohatrinona na ohatrinona izany nefa tsinontsinona aminy akory io naratra io.
*** Izao Soratra Masina izao dia nitarika ny saintsika ho amin’ny nitiavan’i Kristy antsika mihoatra ny zavatra hafa!
*** Rehafa tsapantsika izany Fitiavan’i Jesosy Kristy antsika izany dia mitaona antsika indray Izy ny hitodika amin’ny samy mpianatra, na samy olombelona mba hifankatia.
*** Raha Andriamanitra aza tia antsika izay olombelona ratsy, ataontsika ahoana no tsy ho tia ny olona hafa, izay ilay hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tiana ny tena ary tiana koa ny namana. Io fifankatiavana io dia efa fitoriana ny Filazantsara sahady amin’ny olona rehetra, satria ny Filazantsara lehibe indrindra dia ny Fitiavana izay itiavan’i Jesosy Kristy antsika! Aoka ho amintsika izany saina izany. tsy ny nitiavantsika Azy fa ny nitiavany antsika! Tiava an’i Jehovah Andriamanitra amin’ny fonao rehetra! Tiava ny namanao tahaka ny tenanao! Mahafehy ny didy rehetra ireo! Ny Tompo hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada septembre 11, 2015 Publié dansUncategorized